datacenter ecologico အွန်လိုင်း con servidor ပြတင်းပေါက်များ Server ကို 2008
Su Server ကို VoIP နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး!
datacenter VoIP မှာအင်တာနက်ကိုတယ်လီဖုန်းများအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံဆာဗာများငှား / ငှားရမ်းမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် (VoIP)!
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည် VoIP သည်
ဒါဟာငှားများအတွက်အကောင်းဆုံး option ဖြစ်တယ်, အင်တာနက်ကိုတယ်လီဖုန်း VoIP အတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံဆာဗာများငှားရမ်းမှုသို့မဟုတ်ငှားရမ်း!
ကိုအနုရူပ Servers က
အကောင်းဆုံးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆာဗာကိုသို့မဟုတ် dedicated server ကို Windows server ကို 2008 IP ကို​​တယ်လီဖုန်း software ကိုအပါအဝင် VoIP မှာတယ်လီဖုန်းများအတွက်စပိန်အတွက် “VoipSwitch” အထူးသဖြင့် IP ကို​​ကျော်သောသူ၏အသံအဘို့.
VoipSwitch Class ကို5SoftSwitch 980, လူအပေါင်းတို့သည် tools တွေကို VoIP သည်နှင့်အတူ IP ကို​​တယ်လီဖုန်း software ကို “llave en mano” နှုန်းထားများစီမံခန့်ခွဲရန်, clientes, proveedores y distribuidores (resellers) မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် VoIP သည်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ.
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Servers ကစောင့်ရှောက်
အဆိုပါ Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ရေအားလျှပ်စစ် ServerVoIP ကို​​အသုံးပြုသည်!
သင့်ကုမ္ပဏီကအင်တာနက်တယ်လီဖုန်းဘယ်နေရာမှာမဆို VoIP သည်ကမ္ဘာ့ဖလား
forma Part က de ServiMatango C.A. နှင့် IP တယ်လီဖုန်း VoIP အတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံဆာဗာများငှားရမ်းပေးအပျနှံခဲ့. အဆိုပါ VoipSwitch ပလက်ဖောင်းစီမံခန့်ခွဲဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်, ပြဿနာများသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာမရှိဘဲသင်၏ tools များစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်. ဒါကြောင့်သင်ဟာဖောက်သည်တွေကို generate, ဖြန့်ဖြူးပေးသွင်းဝင်သောနှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူအောင်မြင်သောစီးပွားရေးသမားဖြစ်လာမှဖွဲ့စည်းရန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း VoIP သည်မိနစ်ပံ့ပိုးနေစဉ်ကြီးမားသောဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်အတူအဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်.
ကျနော်တို့ဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ၏ပေးအပ်ခြင်းသေချာစေရန်ဝန်ထမ်းများနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းများစိတ်ကျေနပ်မှု. ServerVoip.com ကစုဆောင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားအမှုဆောင်အရာရှိချက်တင်ကနေတဆင့်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်, 07,30 နံနက်ထံမှ 15:00 pm တွင်တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ဝက်ဘ်နှင့်တယ်လီဖုန်း (ဘိုဂိုတာတစ်နာရီ, Lima, ကွီ, UTC / ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် -5).
တချို့ကအချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ Imbabura ၏ပြည်နယ်မှာ; Franklin နှင့် Nelly တို့သည်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကွီးနှစျအမြော်အမြင်: "Ibarra-အီကွေဒေါကြီးသောအမှုတို့ကိုလုပ်နိုင်စုံစမ်း". ဒါကြောင့်လဲအောင်မြင်မှုအတွက်သူတို့၏လမ်းစတင်: အတွက်အကောင်အထည်ဖော် 2008, ဝန်ဆောင်မှုငှား / ငှားရမ်း ServerVoip.com Server များ; လူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအင်တာနက်တယ်လီဖုန်းဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီ (VoIP) နှင့် Alosip.com နှင့်အတူလက်, အင်တာနက်ကိုကျော်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်မိနစ်ပေး. ဤဝန်ဆောင်မှုများ၏ဆက်လက်ကြီးထွားမှုကြောင့်, သူ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်ဆုံးဖြတ်နှင့်တရားဝင်နာမည်ကိုမှတ်ပုံတင်: Matango န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် "ServiMatango, CA". အတွက်စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့သည် 2012 သူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့အမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမျိုးစုံန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်. ထိုသို့မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, VoipSwitch ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူဆာဗာများငှားရမ်းအင်တာနက်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဝန်ဆောင်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရန်, ဒါဟာကုမ္ပဏီ၏ကျောရိုးသည်.
ကျနော်, Franklin သခွားသီး: "ငါသည်ကျနော့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုပြချင်တယ်, ဘဝအောင်မြင်မှုရရန်အခြားနိုင်ငံများသို့ထွက်ခွာရန်မလိုအပ်ပါ. ဤနေရာတွင်အီကွေဒေါအတွက်ဖြစ်စေသူတို့ drive ကိုအတူနေထိုင်ရာနိုင်ငံအတွက်, လေ့လာ, ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု; ရှေ့ဆက်ရသောအခါပြည်ပမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထည့်သွင်းသောသူတို့သည်လည်းထိုအတူသင် "ကြီးသောအမှုတို့ကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါ.
ယင်း၏ VoIP သည် datacenter ခွင့်ပြုခဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေးအဖွဲ့
အဆိုပါဒေတာစင်တာကလူတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖြစ်ပါသည်စုံလင်သော, စက်တွေနှင့်သဘာဝ. ထက်ပိုမိုတဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးထက်ပိုသုံးနှစ်အတွင်း 17 ယူရိုသန်း, အသင်းအနေနဲ့ Eco-friendly ဖြစ်တဲ့ဒေတာစင်တာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရရှိအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်, နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာထိပ်တန်းနည်းပညာ.
ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆာဗာအဆောက်အဦဆောက်သောအဆောက်အအုံများကိုစိမ်းလန်း data တွေကိုစင်တာများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဒေတာသိုလှောင်မှုပမာဏစိတ်ကူးအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်. အလယ်ပိုင်းဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမဟာဗျူဟာကျတဲ့တည်နေရာကိုအဓိကအားသာချက်ရှိပါတယ်. ဒေတာစင်တာများထွက်ရှိသောအားလုံးဖောက်သည်များအတွက်ဥရောပနှင့်အမေရိကတိုက်ဆက်သွယ်မှုများ၏အပေါငျးတို့နယ်မြေများမှလျင်မြန်တုံ့ပြန်မှုပေးဝန်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကနေအကြိုးသေချာစေရန်တည်ရှိပြီးနေကြတယ်. ထို့အပြင်, အဆိုပါအဆောက်အဦဥရောပ၌တည်ရှိသည်မြေအောက်ရေအချမ်းသာဆုံးဒေသများ၏တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ဒီဆန်းသစ်တဲ့ ServerVoIP ဖျော်ဖြေဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေဖွင့်လှစ်, သဘာဝကျကျဂေဟစနစ်နဲ့ထူးခြားတဲ့အအေးစနစ်က.
အဆိုပါဒေတာစင်တာထိရောက်မှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေပါတယ်, ကုမ္ပဏီရဲ့အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများ၏လုံခြုံမှုနှင့်ရရှိနိုင်. ထို့ကြောင့်, ဒါဟာ data များကိုရရှိနိုင်သေချာကြောင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောဘက်ပေါင်းစုံလုံခြုံမှုစနစ်ကာကွယ်ခြင်း concept ကိုရရှိ. အဆိုပါအဖွဲ့သည်အခြေခံအဆောက်အဦများစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်နှင့်အစစ်ခံနှင့်အတူခပ်သိမ်းသောကာလမှာရရှိနိုင်ကြောင်းကျေနပ်မှုသေချာ.
အဆိုပါ Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ပိုပြီးစွမ်းအင်ကိုချွေတာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လေးစားစေသည်ဤသို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကျိုးဆက်များကို offset သောဒေတာများဖြစ်ပါသည်. data တွေကိုအလယ်ဗဟိုမှာအသုံးပြုတဲ့ဒြပ်စင်စွမ်းအင်ချွေတာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း, (ထရန်စဖော်မာ, UPS ဟာ devices များနှင့်ရာသီဥတုယူနစ်). ရာသီဥတုစနစ်ဖြင့်ဖိအားများဖွင့်ဖို့နှင့်အတူကြီးမားတဲ့အခန်းအအေးဖြစ်ပါတယ် 60% စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျော့နည်း, နှင့် install လုပ်ပြီး system ကိုဖွင့်ဈေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးကိုထိရောက်မှုအချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ် 96%.
MTU technique ကိုအတူပြည်နယ်အင်ဂျင်နှင့်အတူ operating data တွေကိုဗဟို၌အရေးပေါ်အာဏာကိုပေးဝေရေးအတှကျဒီဇယ်မီးစက်, အတန်းအစား-ဦးဆောင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌. သူတို့ဟာက TA-Luft အတိုင်းနိမ့်ဆုံးထုတ်လွှတ်မှုတန်ဖိုးများများ 1/2 (စင်ကြယ်သောလေနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညှနျကွား, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဂျာမန်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်). ဒီဇယ်မီးစက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝင်ရောက်ခြင်းကနေမဆိုလောင်စာကိုတားဆီးလုံခြုံရေးအစီအမံတစ်အရေအတွက်ကို, ဖြည့်ဆည်းနေစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်ယိုစိမ့်ဥပမာ.
ISO ကိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် 27001:
TÜV Saarland (ဂျာမနီမှာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့) datadock အဲဒီ ISO စံနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းသိရသည် 27001. Datadock: server များ www.ServerVoip.com ညျဟုဆိုသျော, ရာ datacenter ဖြစ်ပါသည်, နိုင်ငံတကာစံနှုန်းက ISO အရသိရသည် 27001. la နော်မာက ISO 27001 တည်ထောင်ရန်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်, လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှု, ထိုမှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး (အင်္ဂလိပ်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ထဲမှာသူ့ရဲ့အတိုကောက်အဘို့ ISMS). အဆိုပါ coveted TÜVက ISO 27001 လုံခြုံရေးအကျိုးရှိစွာစီမံခန့်ခွဲမှု၏အသုံးပြုမှုကိုဖောက်သည် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတည်ပြု. ဤအချက်များအားလုံး datadock data များထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နှင့်လုပ်ငန်းများ၌ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ထားသည်ကိုဆိုလိုသည်.
Servidores VoIP သည် VoipSwitch နှင့်အတူ
ကျနော်တို့ရဲ့ IP တယ်လီဖုန်းကတည်းကသင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အကောင်းဆုံးပေး 2008 en todos los rincones del mundo!
Ya no hay excusas para hacer negocios por internet: ငါမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ကုန်းမြေအင်တာနက်ကိုဝန်ဆောင်မှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးဖြစ် VoIP သည်ငါ၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတယ်လီဖုန်း ServerVoIP.com လက်စတင်ခဲ့. Ahora prestoamis clientes múltiples opciones como hostings, software ကို, equipos, publicidad, အချင်းချင်း Alia.
ငါသည်ငါ့ကုမ္ပဏီရဲ့ထင် 8 ငါ၏မြို့ကိုတိုက်ရိုက်အလုပ်အကိုင်သတင်းရပ်ကွက်များနှင့်ထက် သာ. သွယ်ဝိုက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ generated 19 နိုင်ငံပေါင်း: ကိုလံဘီယာ, ပီရူး, အာဂျင်တီးနား, ဘိုလီးဗီးယား, ချီလီ, ကျူးဘား, ဂွာတီမာလာ, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ, ကော့စတာရီ, Puerto Rico, မက္ကစီကို, ယူအက်​​စ်အေ, စပိန်အသင်း, ဘရာဇီးက, အီတလီနိုင်ငံ, အင်ဒိုရာ, မော်ရိုကို, ဂျပန်နှင့်အီကွေဒေါ.
con ခေါ်ရန်မြန်နှုန်း, ကွီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, nos dedicamosala comercialización de telecomunicaciones y productos tecnológicos. Desde hace ocho años y graciasala plataforma de ServerVoIP.com con soporte y video-tutoriales; ကျနော်တို့ကအင်တာနက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏စနစ်ဖြင့်ကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်စပ​​ိန်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်.
Gabriela သည် Garcia ကစီအီးအို
datacenter VoIP သည် ကိုယ်တော်၏ရွေးချယ်မှု VoIP မှာဆကျကပျ Servers ကငှားခ!
အင်တာနက်ကိုတယ်လီဖုန်းများအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံဆာဗာများငှားရမ်းမှုသို့မဟုတ်ငှားရမ်းများအတွက် (VoIP) ဒါဟာ VoipSwitch နှင့်အတူ ServerVoIP ဖြစ်ပါသည်!
Sie7e ဒါဟာအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း VoIP မှာအင်တာနက်ကိုတယ်လီဖုန်းစတင်ရန်ကြောင်းအင်အားကြီးအကြောင်းပြချက်တွေရှိပါတယ်!